RW Rooble talo farahiisa maka bixi doontaa? | KEYDMEDIA ONLINE
Inta badan kooxaha ku haraareysan Ra’iisul Wasaraha Xil-gaarsiinta ayaa la soo warinayaa in iyagoo eeganaya danahooda gaarka ah ay Wasiirka koobaad cadaadis ku saarayaan in uu ka tanaasulo qodobo muhiim ah, taas oo isaga u soo jiidi doonta sumcad xumo iyo guul-darro is huwan.
MUQDISHO, Soomaaliya – Xogo kala duwan oo soo gaaraya xaafiska War-qabadka Keydmedia Online, ayaa sheegaya in xubno sar-sare oo aad ugu dhow xaafiiska Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta, ay Rooble, cadaadis ku saarayaan inuu ka tanaasulo qodobada uu Farmaajo ku dhagay, kuwaas kala ah;
In Xeer jajab lagu dhameeyo kiiska Ikraan Tahliil Faarax, oo ku maqan gacanta hay’adda NISA.
In Bashiir Goobe loo magacaabo xil kale, isla-markaana uu agaasimaha NISA Famaajo magacaabo.
Xubnaha isku dayaya in ay Ra’iisul Wasaaraha ku qanciyaan ka tanaasulka qodobadaas, ayaa kala ah, Wasiirka Waxbarashada Cabdullahi Abuukar Carab, oo Xaafiisyada dowladda dhexdooda looga yaqaan milkiilaha Xukuumadda, Madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor iyo Liibaan Shuluq oo heyb hoose la ah Ra’iisul Wasaaraha.
Wasiirka Waxbarashada Cabdullahi Carab, oo ah saaxiibka ugu dhow ee RW Rooble, ayaa la kulmay culeys kaga yimid dhanka Kooxda Farmaajo, kaas oo saameeyay xarumo ganacsi oo hore loogu naas-nuujiyay, taas oo sababtay inuu danihiisa gaarka ah ka eegto qadiyadaha taagan iyo arrimaha masiiriga ah, isla-markaana uu cadaadis saaro Rooble.
Kadib markii Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda uu is is-hortaag ku sameeyay heshiis uu Wasiirka Warfaafinta Cismaan Dubbe, u saxiixay haweeney ganacsato ah, si ay muddo labaatan sano ah ugu ganacsato qeyb ka mid ah dhulka Tiyaatarka Qaraanka, ayay Kooxda Farmaajo duullaan ku qaadeen, Wasiirka (Idman) ee Xukuumadda Rooble, Cabdullaahi Abuukar Carab, kaas oo share-ka ugu badan ku leh isbitaallada Jazeera iyo Yardimeli oo ku yaalla Muqdisho.
Labada Isbitaal, waxay ku yaallan dhul dowladeed, waxaana lagu dhisay deeq caalami ah, oo ka kala timid Bahrain iyo Turkiga, waxaase lagu naas-nuujiyay ganacsato uu ka mid yahay Wasiirka Waxbarashada, oo xilligaas mas'uul ka ahaa hay’adda Manhal.
Maamulka Gobolka Banaadir, oo ay gadaal ka taagan yihiin Farmaajo iyo Fahad, ayaa dhowr jeer amar ku bixiyay in labada Isbitaal lagu soo wareejio Gobolka, si Cabdullaahi Carab, oo gacanta midig ee Ra’iisul Wasaaraha ah looga joojiyo heshiisyada Isbitaallada.
Sida ay Caddeynayaan xogaha ay heshay KON, Wasiir Carab, waxaa loo ballan qaaday in looga leexanayo heshiisyada labada Isbitaal, hadii uu Rooble, ka dhaadhiciyo in uu ka gaabsado qodobada kor ku xusan.
Dhanka kale, Qoorqoor iyo Liibaan labaduba oo can ku ah, dullaalnimada ayaa doonaya in ay kiiskaan u dhameeyaan sida ay F&F rabaan, isla-markaana uu ka gaabsado khilaafka ka dhashay kiika Ikraan Tahliil.
Dhanka kale, waxaa jira, warar sheegay in Taliyaha uu u magacaabay Agaasimaha Nabad-sugidda ee Bashiir Goobe, uu ku jiro damac ah inuu raadsado kursi Baarlamaan, taas oo fududen karta in Rooble looga adkaado arrinka hoggaanka NISA.
Sidoo kale, xogo muhiim ayaa tibaaxaya in Rooble, uu dabciyay culeyskii uu saaray Maaliyadda, isla-markaana Cabdiraxmaan Ducaale Bayle, (Wasiirka Maaliyadda) loo madax banneeyay maamulka Maaliyadda.